Indawo yokulala ekwiBloko yesi-4 kufuphi nePretty Bay, eMalta - I-Airbnb
Indawo yokulala ekwiBloko yesi-4 kufuphi nePretty Bay, eMalta
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJosef
Le Penthouse ikumgangatho we-4, ngaphezulu kwezindlu ezi-3 kwaye yindawo emfutshane evumela umniniyo omnye. Inomahluko omncinci ukusuka kwamanye amagumbi amathathu:
a) Iindwendwe ezi-5
b) Amagumbi okulala ama-2 aneebhedi ezi-2 umntu ngamnye (kodwa iibhedi zinokudityaniswa)
c) Ikhitshi, Indawo yokutyela & neGumbi lokuHlala (Isofa enye)
d) Iishawari/izindlu zangasese ezi-2
e) Iterrace enentente kunye nendawo yeBBQ
f) Ibhalkhoni engasemva
g) AC ixhotyiswe.
Kufuphi kakhulu kwiSikhululo seenqwelomoya kunye naselwandle. Uninzi lweevenkile, iivenkile, ii-pubs kunye neendawo zokutyela kule ndawo.
Le block yesakhiwo inamagumbi ama-3 abanzi agqitywe kakhulu kunye ne-1 penthouse yonke eqhutywa lusapho olunye. Umahluko omkhulu phakathi kwamagumbi kunye ne-penthouse kukuba i-penthouse inokusingatha iindwendwe ezi-5, kwaye ayinayo ibhokisi lebhokisi. Nangona kunjalo, olu phawu lungekhoyo lubuyekezwa yi-terrace ephangaleleyo enentente kunye nendawo ye-BBQ ejongene ne-Pretty Bay kunye ne-Marsaxlokk Harbour.
IIAPARTMENTE zethu ezi-4
Le bhlokhi enamagumbi ama-4 abanzi agqitywe kakhulu aphethwe kwaye aqhutywa lusapho olunye. Ezi zindlu zilungele amaqela okanye iintsapho ezifuna ukuchitha iiholide zazo kunye. Ukuba usenza isigqibo malunga nokuba ukhetha indawo eNyakatho yeMalta okanye iMalta yaseMzantsi njengeBirżebbuġa, khumbula ukuba indawo yaseMalta yaseMalta ibonakala ingabizi kakhulu kunomntla weMalta, ngokubhekiselele kwigrosari, ii-pubs, iindawo zokutyela kunye nobomi ngokubanzi.
Amagumbi kunye ne-penthouse ifakwe ngokupheleleyo kwizixhobo zombane kunye ne-AC. I-Elevator yanamhlanje ephangaleleyo iyafumaneka.
EZINYE IIAPARTMENTI KWIBLOKO EFANAYO EMFUTSHANE-MAKE ZI ZILANDELAYO. NCEDA UZIPHEPHE KWI-AIRBNB USEBENZISA LA AMAGAMA ALANDELAYO:
IApartment 1 yeBloko yesi-4 kufuphi nePretty Bay, eMalta
IApartment 2 yeBloko yesi-4 kufuphi nePretty Bay, eMalta
IApartment 3 yeBloko yesi-4 kufuphi nePretty Bay, eMalta
Indawo yokulala ekwiBloko yesi-4 kufuphi nePretty Bay, eMalta.
UKUFIKA, UKUHAMBA & UKUTSHA
Ngena: phakathi kwe-3PM - 2AM (kuyathethwano)
Phuma: ngo 11AM ndicela
Ukuba iindwendwe zethu zifike ngaphambi kwe-3PM kwaye igumbi sele liphumile kwaye licociwe, iindwendwe zethu ziya kuvunyelwa ukuba zingene kwigumbi kwaye zizinze. Ukuba iindwendwe zifika ngelixa igumbi lisacocwa sinokuvumela iindwendwe zethu ukuba zishiye imithwalo yazo kwigumbi lebhokisi. Ngokuphathelele ekuphumeni, kwakhona asiyi kufumana inkcaso yokuba iindwendwe zethu zihlale eflethini emva kwexesha lokuphuma rhoqo ukuba inqwelomoya yabo icwangciswe emva kwentsimbi ye-11am okanye ngorhatya, kodwa kuphela ukuba ubhukisho alwenziwanga olo suku. Eyona nto ibalulekileyo kuthi kukuba iindwendwe zethu zigcina igumbi lethu licocekile kangangoko kwaye zisebenzisa uqoqosho kuzo zonke izixhobo ezikhoyo. Iindwendwe ziyacelwa ukuba ziqhagamshelane nathi ngaphambi kokuba zenze naziphi na izigqibo.
Usapho lwethu luhlala kumgama nje weemitha ezimbalwa ukusuka kwindlu. Ilungu losapho lwethu liya kukubulisa xa ufika. Ukusondela kwethu kwigumbi kuya kuba lithuba lokuba sikuncede kwaye songamele ubunzima bakho bemihla ngemihla. Ukwenzela ukhuseleko lwakho sineekhamera zeCCTV ezifakwe ngaphandle komnyango omkhulu. Ungandivi kakubi :) I-Birżebbuġa ikhuseleke kakhulu.
I-Government ECO Tax Contribution ihlawulwa kwi-check in. Ixabiso yi-0.50c ngomntu ngobusuku ukuya kuthi ga kwi-5 € ngomntu ngamnye.
(1) IBirżebbuġa yidolophu ezolileyo kodwa exakekileyo yasePort kuMazantsi eMalta. Apha umntu unokuhlala ngokuphumla nangoxolo kwaye abe namava obomi obuguquguqukayo babantu basekhaya abahamba ezitalatweni bethenga izinto abazidingayo mihla le ngelixa abanye benokuhamba bebaleka okanye behambahamba ecaleni kolwandle oluhle.
(2) Ummandla wethu waziwa kakhulu ngePretty Bay, olona lwandle lukhulu lwesanti eMalta olutsala abantu abaninzi ehlotyeni. Apha abaninzi babedla ngokuchitha ixesha labo bequbha yaye behlamba emini nasebusuku bejikeleza unxweme.
(2) E-Birzebbuġa, iindwendwe kunye neendwendwe zinokufumana lula iimfuno zabo zemihla ngemihla. Kwindawo yethu umntu unokufumana uninzi lweendawo zokutyela, iivenkile, ii-pubs, iivenkile, igrosari, iikhemesti ezi-4, uhambo olude, izinto zokubhala, kunye nee-pubs zasebusuku.
(5) NgeCawa yokuqala ka-Agasti kunye neveki eyandulelayo, idolophu yaseBirzebbuga ibhiyozela uMthendeleko we "Saint Peter Apostle in Chains" kunye nokuhonjiswa okukhulu kwesitrato, iimatshi zebhendi, i-brio kunye neziqhumane.
(6) Idolophu yaseBirżebbuġa ikwalikhaya leendawo ezininzi zembali ezifana nezi:
(a) Għar Dalam, umqolomba oyimbali oqulethe iintsalela zamathambo ezilwanyana ezazivalelwe kwaye emva koko zabhanga eMalta ekupheleni koBukhulu bokuGqibela beGlacial.
(b) I-Borġ in-Nadur, yidolophana yexesha lobhedu kunye netempile ebekwe kumabala ajongene neSt George's Bay.
(c) Iicawa ezininzi neenkonzo zonqulo ukususela kwinkulungwane ye-16 ukuya kuthi ga kwinkulungwane yama-20 ezinikezelwe kwiingcwele ezahlukeneyo.
(7) Kumgama othe qelele, xa umntu ejikeleza inqanawa yolwandle, unokubuka iFort Saint Lucian, inqaba eyakhiwa nguGrandmaster Wignacourt phakathi ko-1610 no-1611.
(8) I-Birżebbuġa nayo ayikude kakhulu kwidolophu yaseTarxien nasePaola (Raħal Ġdid) apho umntu unokufumana indawo yembali kunye neNdawo yangaphambili yeeTempile zaseTarxien kunye ne-'Hypogeum' engaphantsi komhlaba ngokulandelelanayo, zombini zithandwa kakhulu ngabakhenkethi. I-Poala ikwadume kakhulu ekuthengeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Josef